Sida Loogu daro Foomka Galitaanka Dhammaadka Aasaasiga ah - Liiska Faylka Fudud
Waxaa laga yaabaa 16, 2021 September 28, 2020 by Mitch
Muujiyaa Foomka Soo Galitaanka Aasaasiga ah
Qalabkaan bilaashka ah ee WordPress wuxuu ku darayaa gelitaanka hore ee dhammaadka bog kasta, dhejin ama widget wuxuuna u weeciyaa bogga aad dooratay. Waxay sidoo kale xannibi kartaa marin-u-dhammaadka waxayna qarinaysaa Bar Bar. Qalabkaan waxaa loogu talagalay markii aad rabto in isticmaaleyaashaadu ay galaan, laakiin waxaa laga yaabaa inaadan rabin inay helaan marinka WordPress Dashboard.
Si aad u muujiso foomka gelitaanka, dhig koodhkan gaaban bog kasta, boosto, ama widget:
Ka dib marka isticmaaluhu galo, waxaa loo wareejin doonaa boggaaga guriga ama URL aad ku qeexeyso goobaha fiilooyinka.
Hadaad ka tagto goobtan maran foomku wuxuu u wareegi doonaa boggaaga guriga
Si aad u qeexdo meelaha loo socdaa foomamka soo galitaanka oo dheeri ah, isticmaal astaamaha "dib u habeyn" si aad si xad dhaaf ah u raacdo joogitaanka. Xaddid malahan tirada foomamka aad isticmaali karto.
[eeBFEL redire = "https://website.com/your-files-page/"]
U diid Dashboard Helitaanka
In goobaha plugin aad ikhtiyaar u dooran kartaa doorarka in aad rabto in aad diido helitaanka dhamaadka-dhamaadka in ay. Bar-maamulku ma muuqan doono oo toos u isku dayga marin-u-helka dhabarku wuxuu u weecan doonaa boggaaga. Xaddidaadani waxay noqon doontaa goob ballaadhan oo aan ku xidhnayn isticmaalka koodhka gaaban.
Xitaa haddii aadan u baahnayn foom galitaan, tani waxay ku dari kartaa cabir dheeri ah oo amniga ah websaydhkaaga adoo u diidaya gelitaanka dhamaadka-dhamaadka dhammaan doorarka marka laga reebo Maamulayaasha.
Waxay bixisaa labadaba labadaba doorka WordPress-ka ah iyo doorarka gaarka ah ee lagu daro waxyaabo kale
Soo Galitaanka Aasaasiga ah ee Hore waa badeecad WordPress ah oo bilaash ah. Waxaa loo sameeyay isticmaaleyaashayda Liiska Faylka Fudud plugin, laakiin waxay faa'iido u yeelan kartaa noocyo kale oo badan oo codsiyo ah.
Eeg Waxay Shaqeyso | Free Download
Categories Talooyin Post navigation